You are here: Home \_ Services \_ Website Service \_ Customized Web Development Service
ကျွန်တော်များ၏ Soft-Gate Technology Group သည် IT နယ်ပယ်အတွင်းရှိ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ၊ စီးပွားရေးနယ်ပယ်အတွင်းရှိ ကျွမ်းကျင်သော စာရင်းကိုင်များ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု နယ်ပယ်အတွင်းရှိ အောင်မြင်သော စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရှင်များ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် ကျွန်ပျူတာနည်းပညာဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်တော်များ၏ Soft-Gate Technology မှ လူကြီးမင်းတို့၏ ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်း ၊ သင်တန်းကျောင်း ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၊ ဟိုတယ် လုပ်ငန်း ၊ အစရှိသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် web site များကို ချုိုသာသော ဈေးနှုန်း ၊ ပြီးပြည့်စုံသော ၀န်ဆောင်မှု တို့ ဖြင့် အကောင်းဆုံး ရေးဆွဲဝန်ဆောင်မှုပေးလိုပါသည်။
WebSite တစ်ခု ထားရှိခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
1. လူကြီးမင်းတို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိရှိစေနိုင်ခြင်း
2. ပြည်တွင်းရှိ မိမိ၏ Customer များအား ထိရောက်စွာ ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်း
3. ပြည်တွင်း၌သာမက ပြည်ပနိုင်ငံများအထိ ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း
4. Online အမှာစာများကို လက်ခံရယူနိုင်ခြင်း
5. ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာဖြင့် လူသန်းပေါင်းများစွာအား သိရှိစေနိုင်ခြင်း တို့အပြင် အခြား အကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုလဲ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ၏ Web Package များထဲ မှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်အသုံးပြုရုံဖြင့်
1. မိမိတို့ Website ၏ Web Pages Information များအား ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နိုင်သည့် Content Data Management System တစ်ခု
2. ပြည်တွင်း ပြည်ပ နိုင်ငံများ မှ သင့်လုပ်ငန်း ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သော Contact Form တစ်ခု
3. သင့် ကုမ္ပဏီ နာမည်ပါသော Email Account များ ( eg- info@yourbusiness.com )
4. Internet Search Engine များ ဖြစ်သော Google , Yahoo , Bing တို့တွင် သင့် လုပ်ငန်းကို အခြားသူများ အလွယ်တကူ ရှာဖွေတွေ့ရှိစေနိုင်ခြင်း ၊
5. သင့်လုပ်ငန်း ၏ တိုးတက်ပြောင်းလဲ မှုများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိစေနိုင် ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်များ၏ package များထဲ မှ Basic package ကို ၀ယ်ယူပါက တစ်နှစ်စာ အတွက် ငွေကျပ်(၃၀,၀၀၀ိ) ကျပ် ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Basic Package တွင်v 1 Domain ( eg – www.yourbusiness.com )v 1 Email ( eg – info@yourbusiness.com )
v Web page2page ( Business Information Webpage & Contact Form Webpage)
v Free Web Hosting တို့ အပြင် အခြား services များ ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် Domain အမည်၊ ကိုယ်ပိုင် Email လိပ်စာအပြင် မိမိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက် Web Page စာမျက်နှာ(၂)မျက်နှာ နှင့် မိမိလုပ်ငန်းအား ဆက်သွယ်နိုင်မည့် Contact Form တစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Web Page စာမျက်နှာများ ထပ်တိုးမည် ဆိုပါက တစ်မျက်နှာ အတွက် တစ်သောင်းကျပ် ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည် ။
ကျွန်တော်များ၏ package များထဲ မှ Silver package ကို ၀ယ်ယူပါက တစ်နှစ်စာ အတွက် ငွေကျပ်(၆၀,၀၀၀၀ိ) ကျပ် ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Silver Package တွင်v 1 Domain ( eg – www.yourbusiness.com )v5Email ( eg – info@yourbusiness.com )
v Web page5page ( Business Information Webpages & Contact Form Webpage)
v 1 CMS ( Control your webpage information )
မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် Domain အမည်၊ ကိုယ်ပိုင် Email လိပ်စာအပြင် မိမိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက် Web Page စာမျက်နှာ(၅)မျက်နှာ နှင့် မိမိလုပ်ငန်းအား ဆက်သွယ်နိုင်မည့် Contact Form အပါအ၀င် မိမိ website information များအား စိက်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သော Content Management System တစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်များ၏ package များထဲ မှ Gold package ကို ၀ယ်ယူပါက တစ်နှစ်စာ အတွက် ငွေကျပ် (၁၂၀,၀၀၀ိ) ကျပ် ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည် ။ Gold Package တွင်v 1 Domain ( eg – www.yourbusiness.com )v 10 Email ( eg – info@yourbusiness.com )
v web page 10 page ( Business Information Webpages & Contact Form Webpage )
v 1 CMS ( control your webpages information )
မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် Domain အမည်၊ ကိုယ်ပိုင် Email လိပ်စာအပြင် မိမိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက် Web Page စာမျက်နှာ(၁၀)မျက်နှာ နှင့် မိမိလုပ်ငန်းအား ဆက်သွယ်နိုင်မည့် Contact Form အပါအ၀င် မိမိ website information များအား စိက်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သော Content Management System တစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်များ၏ package များထဲ မှ Diamond package ကို ၀ယ်ယူပါက တစ်နှစ်စာ အတွက် ငွေကျပ်(၂၀၀,၀၀၀ိ)ကျပ် ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည် ။ Diamond Package တွင်v 1 Domain ( eg – www.yourbusiness.com )v 20 Email ( eg – info@yourbusiness.com )
v web page 20 page ( Business Information Webpages & Contact Form Webpage )
မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် Domain အမည်၊ ကိုယ်ပိုင် Email လိပ်စာအပြင် မိမိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက် Web Page စာမျက်နှာ(၂၀)မျက်နှာ နှင့် မိမိလုပ်ငန်းအား ဆက်သွယ်နိုင်မည့် Contact Form အပါအ၀င် မိမိ website information များအား စိက်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သော Content Management System တစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Package Basic Silver Gold Diamond
Price ( Per Year ) 30,000 Kyats 60,000 Kyats 120,000 Kyats 200,000 Kyats
Page Count2– Page5– Pages 10 – Pages 20 – Pages
Image Count 10 50 100 Unlimited
Image Gallery none Include Include Include
Banner Image 1510 Unlimited
Contact Form 1 1 1 1
Content Management System 1 1 1 1
Google Map 1 1 1 1
Search Box none Include Include Include
Server Disk Space 20 MB 50 MB 100 MB 1000 MB
Server Bandwidth Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Site Security & Maintain Include Include Include Include
Monthly Backup Include Include Include Include
Email Account 1510 20
MySql No Yes Yes Yes
Search Engine Optimization ( SEO ) Include Include Include Include
Visitor Count Include Include Include Include
Phone Call Service Include Include Include Include
Live Chat Support None None Include Include
+ One Page ( Per Year ) 10000 Kyats 10000 Kyats 10000 Kyats 10000 Kyats
+ One Image 500 Kyats 500 Kyats 500 Kyats FREE
+ Update ( Per Page ) 5000 5000 5000 FREE
ကျွန်တော်များ၏ Soft-Gate Technology မှ ၀န်ဆောင်မှုပေးသော Web Package များအပြင် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် သီးသန့် Domain Name ၀ယ်ယူပေးခြင်း၊ Web Hosting ၀ယ်ယူပေးခြင်း တို့ကိုလည်း ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ ၀န်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်တော်များ၏ Soft-Gate Technology မှ ၀န်ဆောင်မှုပေးသော Web Package များအပြင် လူကြီးမင်းတို့၏ ကုမ္ပဏီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော Online ၀န်ဆောင်မှုစနစ်များကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲ ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိပါသည်။
* Online Order Management System
* Online Enrollment Management System
* Online Auction Management System
* Online Reservation Management System
* Online Ticket Management System
* Web to SMS System